ကုန်းဘောင်ကြီးကြော် ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
ကြက်သွန်နီ.....................၂ လုံး ( လေးစိတ်ခွဲ)
ပန်းငရုတ်ပွ.....................၁ လုံး( ၈ စိတ်ခွဲ )
မုန်လာဥနီ၊ ပန်းပွင့်၊ ရွှေပဲ ၊..အနည်းငယ်စီ
ချင်းသေးသေး.................၁ တက် (အမျှင်လှီး)
ကြက်သွန်ဖြူ...................၃ တက်( ရိုက်ပြား)
ကြက်သွန်မြိတ်................၃ ပင် ( လက်တစ်ဆစ်ခန်.လှီး)
မိမိအသုံးပြုလိုတဲ့အသားကို ရေးဆေးသန်.စင်ကာ ပါးပါးလှီးပြီး ပဲငံပြာရည်။ဟင်းခတ်မှုန်. ၊ သကြား ၊ ငရုတ်ကောင်းတို.နှင့်နှပ်ပြီး နယ်ထားပါ။
နယ်ပြီးနှပ်ထားတဲ့အသားတွေကို ဂျုံးမှုန်.လေးလူးကာ ဆီပူပူမှာရွှေရောင်ရ
မီးအရှိန်ကိုမြှင့်တင်ပြီး..ကြက်သွန်နီ ၊ ခရမ်းချဉ်သီး ၊ပန်းငရုတ်ပွ ကြော်ထားတဲ့အသား
တွေထည့်ပြီး..ပဲငံပြာရည်အပျစ် ၊ အကြည် ၊ ခရုဆီ ၊ သကြား ၊ ဟင်းခတ်မှုန်.
နောက်ဆုံး..ရေနွေးဖျောထားတဲ့ အသီးအရွက်လေးထည့်ပြီး..မွှေကာ ငရုတ်ကောင်း ၊ တရုတ်မဆလာ ၊ ကြက်သွန်မြိတ်လေးဖြူးထည့်သုံးဆောင်နိူင်ပါသည်။
မှတ်ချက် ။။ အသီးအရွက်တွေအများကြီးထည့်ဖိုမလိုအပ်ပါ။